ईमकालु विशेष Archives - Emakalu Online
कानुनी रुपमा हेर्दा विसं २०४७’ ले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग वर्ग आदिको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले नै सर्व प्रथम नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी पहिलोपटक स्वीकार गरेको थियो । तापनि विसं २०४७ को संविधानमा धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, खाद्यानको हक, निःशुल्क स्वास्थ्यको हक,...
आदिवासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको तेश्रो जिल्ला अधिवेसन हालै सम्पन्न भएछ । संगठित हुनु राम्रो हो, अध्यक्ष लगायत सवै पदाधीकारीहरुलाई शुभकामना । जनजाती महासंघको कुरा गर्दा झण्डै एक दशक अघिको कुरा याद आउछ । महासंघको ठेक्का लिएका झै गर्नेहरुले जिल्ला अधिवेसन गरेछन् र डम्बर बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन गरे । उक्त समितिमा हालै नव निर्वाचित अध्यक्ष विपिन तामाङ सचिवमा निर्वाचित भए ।...
नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्था २०३९ सालमा स्थापना भै प्राणघातक मान्ने गरिएको क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा क्रियाशिल नेपालमै पहिलो गैह्र नाफामुलक संस्था हो । संस्थाले नेपालका ४६ वटा जिल्ला शाखा मार्फत क्यान्सर रोग नियन्त्रण र निवारणका लागि जनचेतना अभिबृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गरिहेको छ । क्यान्सर के हो ? नेपाल अवुर्दरोग बिवारण संस्था यसले क्यान्सर रोगका क्षेत्रमा संचालन गरिरहेको गतिबिधी के क...
मानव सभ्यताको विकासक्रममा स्थान विशेष अनुसार अनुकुलन हुँदै जाँदा विभिन्न सँस्कृति, समुदाय र जातिको उत्पत्ति हुन गयो । सँस्कृतिले मानव जातिलाई पहिचान दिन्छ । साँकृतिक आधारमा अलग स्थानमा बस्नेहरुले अलग जाति, अलग समुदाय, अलग बासिन्दाका रुपमा आफूलाई चिनाए । उनीहरुको चिन्तन शैली, भाषा, भेषभूषा फरक फरक निर्माण भयो र आजको यो विविधतापूर्ण समाज बन्न पुग्यो । अहिलेसम्मको समाज विकास इतिहास र सामान्य नियम य...
खाँदबारी । तपाईं कुनै किरात बस्तीमा पाहुना लाग्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई हार्दिकतासाथ टक्रयाइने एउटा परिकार हो, वाचिपा । संभवत तपाईंको लागि यो एकदमै नयाँ र नौलो स्वाद हुनेछ । किनभने ‘वाचिपा’ले अहिले त्यती व्यापकता पाइसकेको अवस्था छैन । यद्यपी गाउँघरतिर कुखुरा काटियो भने वाचिपा अनिवार्य बन्छ । किनभने वाचिपाको सीतन बिना कुखुराको मासु कहाँ स्वादिलो हुन्छ र ? वाचिपा खासमा सीतन हो । सीतन, जसलाई तप...
खाँदबारी । सङ्खुवासभाको भोटखोलामा बनाउन लागिएको एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपले आकर्षक देखिएको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले प्राविधिक रूपले चुस्त र उत्पादन लागत, लगानी प्रतिफलमा आकर्षक देखाएको हो । सरकारी आयोजनाका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत बनाउन लागिएको अर्धजलाशययुक्त सो आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गर्न लागिएको हो ।...
यसरी धमाधम विद्युत निकाल्दै छन् सिसुवाखोलावासी (फोटो फिचर सहित)
सङ्खुवासभा । जिल्लाकै अति दुर्गम मानिएको सिलिचोङ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाईन पुगेको छैन । तर त्यहाँका ८५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरु अँध्यारोमा बस्नु परेको छैन । पर्याप्त जलश्रोत भएको सिलिचोङ गाउँपालिकामा स्थानीय खोलानालाबाट लघु जलविद्युत उत्पादन गरेर उनीहरु उज्यालोमा बस्दै आएका छन् । उक्त विद्युत नपुगेको गाउँ सिलिचोङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ सिसुवाखोलामा पनि लघु विद्युत न...
काठमाडौं । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको सांगीतिक रियलिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ यतिबेला उत्कर्षमा छ । दोस्रो संस्करण अन्र्तगत सञ्चालन भइरहेको यो प्रतियोगिताको आगामी शनिबार अन्तिम छिनोफानो हुँदैछ । अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि चार जना प्रतियोगी मैदानमा छन् । यसमध्येका एक हुन्, राम लिम्बु । झापाका राम कसरी भ्वाइस अफ नेपालमा आइपुगे रु उनको संगीत यात्रा कस्तो रह्यो ? उनकै शब्दमाः खासमा म फु...
को हुन् धरानको ‘लाल किल्ला’ तोड्ने तिलक राई
धरान । मेयरमा निर्वाचित तिलक राई कांग्रेसले ठूला वा चर्चित नेता होइनन् । उनी सामान्य र सरल व्यक्ति हुन् । तर, जनताको विश्वास जित्न ठूलो नेता चाँहिदैन, जनतामा भिजेको नेता चाहिन्छ भन्ने कुरा तिलकले सावित गरिदिए । कांग्रेस नेता तिलक राई भोजपुरमा जिन्मएका हुन् । पूर्वगोर्खा सैनिक पृष्ठभूमिका उनले धरानमै आफ्नो वाल्यकाल बिताए । शिक्षा दीक्षा पनि यहीँ लिए । तथापि उनले एसएसलसी उत्तीर्ण गरेपछि आफ्नो औपच...
भाउजूले नै यसरी पुर्‍याइन् वेश्यालय
काठ्माण्डौ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोको अफिसियल फेसबुक पेजमा मंसिर ८ मा एउटा सन्देश आयो । सन्देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एक व्यक्तिले १२ वर्षको उमेरमा घरबाटै हराएकी आफ्नी छोरी दिल्लीको वेश्यालयमा बेचिएकाले छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न आग्रह गरेका थिए । सन्देश पाएपछि प्रहरीले तत्कालै अनुसन्धान अगाडि बढायो । किशोरीलाई दिल्लीको वेश्यालयसम्म पुर्‍याउने घटनाको सुरुवात ०७३ कात्तिकमा भएको थि...